आकस्मिक र कोभिडबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने चिकित्सक संघको घोषणा
नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको अनसनको समर्थनमा आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक तथा कोभिड १९ बाहेकका अन्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आइतबारसम्म डा. केसी माग सम्बोधन नगरेमा यो आन्दोलन गर्ने चेतावनी चिकित्सक संघले दिएको हो ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा तथा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनसन बसेको २७ दिन भएको छ ।
बुधबार चिकित्सक संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालहरु ठप्प पार्ने घोषणा गरेको हो । डा. केसीका मागप्रति सरकार गम्भीर नभएमा आन्दोलनका थप कडा कार्यक्रममा जान बाध्य हुने संघले जनाएको छ ।
यसअघि संघले केसीसँग वार्ता गर्न सरकार तयार भएको र वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै यसअघिका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो ।
तर, शनिबार वार्ताका लागि बनेको डा. केसीको समूहले सरकार गम्भीर नभएको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको थियो । लगत्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर डा. केसीलाई अनसन स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा तथा यो क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै डा. केसी अनसन बसेको यो १९ औं पटक हो । हुम्लाबाट सुरु भएको डा. केसीको यो अनसन आज २७ औं दिनमा चलिरहेको छ । अहिले डा. केसी महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छन् ।
प्रकाशित मिति : असोज २४, २०७७ शनिबार १८:१४:४२,